Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Janoary, 2011
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Janoary, 2011
Ejipta29 Janoary 2011
Ejipta27 Janoary 2011
Nidina an-dalamben'i Kairo sy ny tanàna Ejipsiana maro hafa ny mpanao fihetsiketsehana ny talata 25 janoary teo izay andro tsy niasana, “Andron'ny Polisy”, hanoherana ny 30 taona nitondran'olo-tokana nanjakan'ny Filoha Muhammad Hosni Mubarak. Maro amin'ny mpitazana no nahatsikaritra ny fahabangan'ny tatitra ataon'ny gazety be mpanaraka, saingy nanangona andian-dahatsary ao amin'ny...
Maro ny tatitra mikasika ny fifandonanan'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana no mivoaka avy ao Suez, 129km atsinanan'i Cairo renivohitra, sady mafy sy mazava, raha miditra indrindra amin'ny andro fahatelo ny hetsika rehetra manerana an'i Ejipta. Miaraka amin'ny fahatapahan'ny tambajotra finday, manjavozavo ho an'ireo mponin'ny aterineto ny vaovao. Ny...
Raha nirotsaka handrakotra an'i Ejipta ny haizin'ny alina, nitohy hatrany kosa ny hetsi-panoherana tao Cairo sy nanerana ny firenena. Toy izany koa ny tatitra momba ny herisetran'ny polisy, nefa koa ny hetsika maha-te-hidera avy amin'ireo mponina sy mpandraharaha eo an-toerana. Ho hita eo amin'ny maraina raha hitohy na tsia ny...
Ejipta26 Janoary 2011
Ejipta: Voasakana ny Twitter raha mbola mitohy kosa ny fihetsiketsehana
Nanao dingana iray indray i Ejipta amin'ny adiny amin'ny Aterineto, ary dia nanapaka ny fifandraisana amin'ny finday any amin'ireo faritra nambara fa hifamorian'ireo mpanohitra an'arivony androany mandritra ny Andron'ny Revolisiona. Ny tanjona dia toa hifehezana ireo andiana mpanao fihetsehana sy hanakendana ny hetsika.
Alzeria : midera ny herim-pon'ny vahoaka any Tonizia ny any Alzeria
Alzeria25 Janoary 2011
Noharabain'ny mponina any Alzeria ny hetsika fanoherana nataon'ny vahoaka tany Tonizia nandravana ny fanjakan'i Zine El Abidine Ben Ali [EN] izay nanjaka tokana nandritra ny 23 taona. Any amin'ny resadresaka rehetra, ny bilaogy sy ny facebook, dia tsy hitan'ny vahoaka any Alzeria intsony izay hilazana ny herim-pon'ny vahoaka Toniziana izay nanohitra...
Israely25 Janoary 2011